Tenga Bvudzi Kusviba & Anti Kurasikirwa Bvudzi Natural Organic Polygonum Shampoo - Kutakura Mahara & Hapana Mutero | WoopShop®
Bvudzi Kusviba & Anti Kurasikirwa Bvudzi Natural Organic Polygonum Shampoo
$18.99 Regular price $23.99
Ngarava Dzinobva United Kingdom China nyika dzakabatana
basa 1Pcs 2Pcs 3Pcs 5Pcs 4Pcs
Nyika dzakabatana / 1Pcs China / 2Pcs China / 1Pcs Nyika dzakabatana / 1Pcs China / 3Pcs Nyika dzakabatana / 3Pcs Nyika dzakabatana / 2Pcs Nyika dzakabatana / 2Pcs Nyika dzakabatana / 3Pcs China / 5Pcs Nyika dzakabatana / 5Pcs Nyika dzakabatana / 5Pcs China / 4Pcs Nyika dzakabatana / 4Pcs Nyika dzakabatana / 4Pcs
Bvudzi Kusviba & Anti Kurasikirwa Bvudzi Natural Organic Polygonum Shampoo - United Kingdom / 1Pcs yakadzoserwa kumashure uye inotakura nekukurumidza painongodzoka muchitoro.
Muenzaniso Nhamba: 105205
Item Rudzi: Shampoo
Rudzi Rwebvudzi: Zvese
Model Nhamba: Shampoo Soap
Rinoshanda: Anti-Bvudzi kurasikirwa
Kukura: 6 x 6 x 2.3 cm
Zvisungo: Polygonum multi florum, Panax ginseng, glycerine Butyrospermum parkii, Olea europaea, mvura, sodium mafuta emuchindwe.
Inodzoreredza Natural Bvudzi Ruvara
Nyorera seyako yemazuva ese shampoo bhaa uye woona shanduko yebvudzi rako chena kana chena kune diki uye rakajeka rerima zvakare.
Inosimudzira bvudzi kukura & kudzivirira kurasikirwa
Zvinobudirira zvinodzivirira kurasikirwa kwevhudzi nekusimudzira kutenderera kweropa remusoro, kukurudzira kukura kwemvere dzemvere nekusunga midzi yebvudzi paganda mukati memasvondo maviri apo ichinyorovesa nekugadzirisa kukuvara kwebvudzi.
Anti-Dandruff, Vandudza dambudziko rekumusoro
Simbisa uye gadzirisa bvudzi rakakuvara
Iine mishonga yakakosha senge fallopian multiflora yekumisazve bvudzi pigment maseru Melanocyte uye ginger ine yakasarudzika anti-kupisa uye antiseptic zvivakwa, kuchengetedza ganda remusoro rakagwinya.
Dzosera bvudzi rako rechisikigo, kubva paguru rebvudzi kuenda kune rakasviba ruvara, dzosa chivimbo chako zvakare nekutarisa uye nekunzwa uchiri mudiki zvakare neese-nyowani Bvudzi Kusviba Shampoo Bhawa.
Iyo inowanzo dzoreredza pigment maseru, nepo ichiratidzika ne 100% organic makemikari ayo asina-chepfu & makemikari-emahara. Yakachengeteka enzanisa nechero shampoo yechinyakare uku uchikuunzira kupenya & kwakajeka bvudzi kutaridzika.
Chinhu chikuru chePolygonum chine simba rekumutsiridza maseru anogadzira pigment anogadzira maseru muvhudzi, izvo zvinokurudzira kutenderera kweropa mumusoro, izvo zvinoita kuti bvudzi rikure, zvichikonzera kukura kwebvudzi mumavhiki mashoma!
100% organic & Yakachengeteka
Iyo haina zvine zvinokuvadza zvemukati nemakemikari.
Package Inosanganisira: (Zvinoenderana neyako odha)
1 * Kusviba Shampoo Bhawa
Kubva paongororo dze 39
Handizive kuti sei nezve kubvisa bvudzi rakachena, asi vhudzi sipo iyi inoshamba zvakanaka. Panguva, kugeza bvudzi creaks uye ipapo pachangu ndinofanira kusunda. Prada, unoda bharisamu yakanaka kana chifukidzo mushure mekugeza. Kurudzira! Ini ndichatenga zvimwe.
Sekutsanangurwa, maita basa